29,000 oo Soomaali ah oo ka cararay Yemen
Qaxootiga Soomaalida Yemen oo Gaaray Bossaso
QM ayaa sheegtay in kumanaan qof oo Soomaali ah ay ka laabanayaan dalka dagaalada ay aafeeyeen ee Yemen, inkasta oo ay tiri in xaalad bani aadannimo oo darran ay ka jirto dalkoodii hooyo.
Xafiiska xuquuqda aadanaha ee QM ayaa maanta oo talaado ah sheegay in ku dhowaad 29,000 qof oo Yemen ka tagay ay gaareen Soomaaliya tan iyo bishii March ee sanadkan. Dadkaasi badankood waa Haween iyo carruur, waxaana la filayaa in sidoo kale dad kale ay laabtaan bilaha soo aadan.
Dib u laabashadan gacanka cadmeed loo marayo, ayaa ah caksiga arrin muddo soo jirtay oo ahayd in boqol kun oo Soomaali ah ay dalkooda ka cararayeen una baxsanayeen dalka Yemen, si ay uga bad baadaan gaajada iyo saboolnimada.
Dalka Yemen ayaa waxaa asiibay bilo dagaallo culus ah oo u dhaxeeya mucaaradka Xuutiyiinta iyo ciidamo daacad u ah madaxweyne Cabdu Rabi Mansuur Xaadi.
Sida ay ku warrameyso QM, imaatinka Soomaalida dib ugu soo laabanaya dalkooda ayaa sii adkeyneysay xaalad bani aadannimo ee markii horeba xumeyd ee ka jirta Soomaaliya. Waxaa QM ay qiyaaseysaa in 1.1 milyan oo qof oo Soomaali ah ay ku barakacsan yihiin gudaha Soomaaliya.
Xaaladda ayaa waxa ay si gaar ah u liidataa bartamaha iyo koonfurta dalka. QM ayaa sheegeysa in ku dhowaad 20% dadka magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxaa haya nafaqa darro aad u xun.